We Fight We Win. -- " More than Media ": စိုင်းနော်ခမ်း
စိုင်းနော်ခမ်း အလောင်းကို ပြန်တောင်းပါ။ ရှမ်းပြည်မှာရုပ်ထုထုထားပါ။ လက်ပတောင်းတောင်က လယ်သမားများစွာရဲ့ ဘ၀ကုိုသတ်သွားသူတွေနဲ့ စာရင်။
တရုပ်ဖဲသမား ၁၃ ယောက်ကို သတ်တာ သူမှာအပြစ်မရှိပါ။
ရွှေတြိဂံနယ်မှာ လာအိုဖက်မှာ တရုပ်က ကာစီနို ရုံတွေကို ထောင်ထားတယ်။
တရုပ်တွေ မဲခေါင်မြစ်အတိုင်း ဖဲလာကစားကြတာပါ။ စိုင်နော်ခမ်းလိုပဲ ဒီဒေသတ၀ိုက်ကလူငယ်တွေကို ဖျက်ဆီးကြတဲ့အထဲမှာ တရုပ်၊ မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့လာအို့ အစိုးရမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပဲ။ စိုင်းနော်ခမ်းဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မင်းလောင်း မောင်သန့် ဘ၀ ပါ။ စစ်အုပ်စု မြန်မာတမျိုးသားလုံးကို တရုပ်က စောကားလိုက်တာဖြစ်တယ်။
စိုင်းနော်ခမ်း ကို ဂုဏ်ပြုကြ။
မြန်မာ စစ် အုပ်စု ကျဆုံးပါစေ။
Respect the human rights!. Regardless of the nationality, murderer should not be honor.
စောက်တရုတ်တွေ မြန်မာပြည်သူအတွက် မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ပါ..ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အုပ်စုတွေကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်..နိင်ငံတကာမှာတရုတ်ကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို မဇွတ်ဖက်ဘူးပြောလိုပြော လက်တွေ့မှာတော့ စစ်အုပ်စုတွေကို နိင်ငံတကာမှာ ဗီတိုနဲ့ ကာကွယ်ပေးခဲ့တာလည်း မြန်မာပြည်တွငိးရေးကို ဇွတ်ဖက်နေတာပဲ.။ စောက်တရုတ်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အချိန်ကျရောက်နေပြီခင်ဗျာ....။
Omg.....u want next generation to admire this kind of
Drug dealer by building his statue..r u out of ur mind.??
wow you are suchamoron. how do you even suggest to buildastatue or drug dealing killer? no matter who he killedalife isalife.amurder isamurder. thank god nobody in Myanmar give you any power. with that kind of thinking you have our country will sink deeper.